SocialCentiv ဖြင့်တွစ်တာတွင်နားထောင်ပြီးပစ်မှတ်ထားနိုင်သည့်အခွင့်အလမ်းများ Martech Zone
တနင်္လာနေ့မတ်လ 23, 2015 ဗုဒ္ဓဟူးနေ့, စက်တင်ဘာလ 2, 2015 Douglas Karr
နေ့စဉ်တွစ်တာသုံးစွဲသူသန်း ၂၃၀ သည်သန်းပေါင်း ၅၀၀ ကျော်ကိုတွစ်များပေးပို့ကြသည်။ မှန်ကန်သောသော့ချက်စာလုံးများဖြင့်စီးပွားရေးလုပ်ငန်းများသည်ဒေသခံဖောက်သည်များကိုခွဲထုတ်နိုင်သည်။ လှည့်ကွက်သည်တွစ်တာတွင်မည်သည့်သော့ချက်စာလုံးများအလုပ်လုပ်သည်နှင့်မည်သို့စကားပြောခြင်းဖြစ်သည်ကိုနားလည်ခြင်းဖြစ်သည်။ လူမှုရေး သင်၏စီးပွားရေးနှင့်သက်ဆိုင်သောကုန်ပစ္စည်း၊ ၀ န်ဆောင်မှု (သို့) အကြောင်းအရာများနှင့်ပတ်သက်သောသူတို့၏ရည်ရွယ်ချက်ကို Tweet လုပ်သူများကိုသတ်မှတ်သည်။ ထို့နောက်သင်သည်အလားအလာရှိသောဖောက်သည်များအားသူတို့၏ ၀ ယ်ယူမှုဆုံးဖြတ်ချက်အပေါ်သြဇာလွှမ်းမိုးရန်ဒီဇိုင်းဆွဲထားသည့်သီးခြားစိတ် ၀ င်စားမှုကိုတင်ပြနိုင်သည်။
၂၀၁၄ အမျိုးသားဘောလုံးပြိုင်ပွဲဘောလုံးရာသီတွင်ဘောလုံးပရိသတ် ၅ သန်းနီးပါးသည်သူတို့၏အကြိုက်ဆုံးအသင်းအကြောင်းကိုတွစ်တာရေးသားခဲ့သည်။ ပြီးတော့အားကစားသမားတွေအတွက်ကတော့ ၅ သန်းစီရောင်းအားရတယ်။ ဥပမာအားဖြင့် ၁၂၅၀၀၀ ၏အစောပိုင်းသည် @Mr_Polo မှအထက်နှင့်တူသောဟူစတန်တက္ကဆက်များအကြောင်းဖြစ်သည်။ ဤ Tweets များသည်အားကစားသမားများအတွက်အထူးစျေးနှုန်းချိုသာစွာဖြင့်ဈေးဝယ်ခြင်းနှင့်ပန်ကာဂီယာကိုတိုက်ရိုက်တုန့်ပြန်ရန်အကောင်းဆုံးအခွင့်အလမ်းဖြစ်သည်။
မှန်ကန်သောသော့ချက်စာလုံးများကိုရွေးချယ်ခြင်းသည်ဤလူမှုရေးပလက်ဖောင်းပေါ်တွင်အောင်မြင်ရန်စျေးကွက်ရှာဖွေရေးလှုပ်ရှားမှုတစ်ခုအတွက်အရေးကြီးသည်။ တစ်ချိန်တည်းမှာပင်တွစ်တာသည်လူတို့၏ခံစားချက်များကိုမတူကွဲပြားသောထိုးထွင်းသိမြင်မှုကိုပေးသောကြောင့်စျေးကွက်သမားများကသုံးစွဲသူများသည်တွစ်တာအသုံးပြုပုံကိုသုတေသနပြုပြီးသူတို့၏သော့ချက်စာလုံးများကိုအညီတည်ဆောက်ရမည်။ ၏အမှုဆောင်အရာရှိချုပ် Bernard Perrine လူမှုရေး
စည်းရုံးလှုံ့ဆော်ရေးကိုစိတ်ကြိုက်ပြင်ဆင်ပါ - သင်၏စည်းရုံးလှုံ့ဆော်ရေးကိုသော့ချက်စာလုံးများဖြင့်အံဝင်ခွင်ကျဖြစ်စေရန်နှင့်သင်၏စီးပွားရေးတိုးတက်စေရန်အထောက်အကူပြုရန်။
အချိန်နှင့်ငွေကိုချွေတာပါ - သက်ဆိုင်ရာ Tweets ကိုရှာပါ။ သို့မှသာသင်အမှန်တကယ်လူများနှင့်အမှန်တကယ်စကားပြောဆိုမှုများတွင်သူတို့လိုချင်သည့်အချိန်တွင်သူတို့လိုချင်သည့်သတင်းအချက်အလက်များကိုရယူနိုင်သည်။
ခေတ်မီသင်ယူမှု - Tweet လုပ်သည့်အခါတိုင်း SocialCentiv သည်သင်၏စီးပွားရေးနှင့်မည်သည့် Tweets အမျိုးအစားများကိုလေ့လာပြီးမှတ်မိမည်နည်း။
ပထဝီဝင်ရည်မှန်းချက် - ဒေသဆိုင်ရာ Tweets များကိုပစ်မှတ်ထားခြင်းအားဖြင့်သက်ဆိုင်ရာစားသုံးသူများကိုပိုမိုတိကျမှန်ကန်စွာဆက်သွယ်ပါ။
ကုန်အမှတ်တံဆိပ်ပွား - အလားအလာရှိသောဖောက်သည်များနှင့်ဆက်ဆံပါ၊ သင်၏စီးပွားရေးကိုသူတို့၏အာရုံစူးစိုက်မှုကိုယူဆောင်လာလိမ့်မည်။
လက်ငင်းတုံ့ပြန်မှု - ချက်ချင်းပင်“ retweet”၊ “ follow”၊ “ အကြိုက်ဆုံး” နှင့်“ တုန့်ပြန်မှု” ဖြစ်နိုင်ချေရှိသောဖောက်သည်များ။
Insightful Analytics မှ - ဂရပ်ဖစ်၊ တစ်လမှတစ်လခြုံငုံသုံးသပ်ချက်ကို သုံး၍ တွစ်တာစကားပြောဆိုမှုများနှင့်ဖောက်သည်များကိုနှိုင်းယှဉ်ပြီးသင်လေ့လာသည့်အရာပေါ် မူတည်၍ အရေးယူပါ။
အကြံပြုပြန်ကြားချက် - ဒီဆော့ဖ်ဝဲသည်သုံးစွဲသူများအနေဖြင့်အလားအလာရှိသောစားသုံးသူများနှင့်ပိုမိုမြန်ဆန်စွာအလွယ်တကူဆက်သွယ်နိုင်ရန်အကြံပေးချက်များကိုပေးထားသည်။
တိုက်ရိုက်ပံ့ပိုးမှု - သင် SocialCentiv လျှောက်လွှာကိုအသုံးပြုပြီးမည်သည့်အချိန်တွင်မဆိုကျွန်ုပ်တို့ကိုကူညီသောဝန်ထမ်းများနှင့်စကားပြောပါ။
MailChimp ပေါင်းစည်းမှု - SocialCentiv မှဖောက်သည်များ၏ဆက်သွယ်ရန်အချက်အလက်များကိုအလိုအလျောက်တင်သွင်းသည့် MailChimp နှင့်ကျွန်ုပ်တို့၏ built-in ပေါင်းစည်းမှုနှင့်သင်၏ဖောက်သည်များ၏ဆက်ဆံရေးကိုထိန်းသိမ်းပါ။
မှန်ကန်သောသော့ချက်စာလုံးများဖြင့်အားကစားစျေးသည်များသည်ပျမ်းမျှ ၅၀ ရာခိုင်နှုန်းသောကလစ်နှိပ်ခြင်းဖြင့်ဒေသခံဖောက်သည်များကို Twitters တွင်ရှာနိုင်သည်။ လှည့်ကွက်မှာမည်သည့်သော့ချက်စာလုံးများအလုပ်လုပ်သည်နှင့်တွစ်တာတွင်မည်သို့စကားပြောဆိုမှုများဖြစ်ပျက်သည်ကိုနားလည်ခြင်းဖြစ်သည်။ SocialCentiv သည်သင်၏စီးပွားရေးနှင့်သက်ဆိုင်သောကုန်ပစ္စည်း၊ ၀ န်ဆောင်မှု (သို့) အကြောင်းအရာနှင့် ပါတ်သက်၍ သူတို့၏ရည်ရွယ်ချက်ကို Tweet လုပ်သူများကိုသတ်မှတ်သည်။ ထို့နောက်သင်သည်အလားအလာရှိသောဖောက်သည်များအားသူတို့၏ ၀ ယ်ယူမှုဆုံးဖြတ်ချက်အပေါ်သြဇာလွှမ်းမိုးရန်ဒီဇိုင်းဆွဲထားသည့်သီးခြားစိတ် ၀ င်စားမှုကိုတင်ပြနိုင်သည်။
ကျွန်ုပ်တို့သည် SocialCentiv တွင် Twitter နှင့်ပက်သက်သည့်ပရိသတ်များနှင့်ချိတ်ဆက်ခြင်း၊ နောက်ဆက်တွဲလုပ်ဆောင်ခြင်းနှင့်၎င်းတို့ကိုယ်တိုင်ဂရုစိုက်လိုသောကုမ္ပဏီများအတွက် do-it-yourself version နှင့်အတူစီမံထားသောဝန်ဆောင်မှုများကိုကျွန်ုပ်တို့ကမ်းလှမ်းသည်။ မည်သည့်နည်းနှင့်မဆိုကျွန်ုပ်တို့၏ဖောက်သည်များသည်၎င်းတို့ကိုလူများလက်ခံခြင်းကိုလက်ခံသည့်အချိန်တွင်စျေးကွက်ရှာဖွေရေးမက်ဆေ့ခ်ျများနှင့်အတူစားသုံးသူများထံသူတို့ထံရောက်ရှိရန်ကူညီပေးသည့်အစွမ်းထက်။ တတ်နိုင်သောကိရိယာကိုရကြသည်။ SocialCentiv ၏အမှုဆောင်အရာရှိချုပ် Bernard Perrine
ဥပမာအားဖြင့်၊ လွန်ခဲ့သောနှစ်အတွင်းပရိသတ် ၂၅ သန်းနီးပါးသည်၎င်းတို့၏အကြိုက်ဆုံးအသင်းများအကြောင်းတွစ်တာတွင်တင်ခဲ့သည်။ ၎င်းတို့ထဲမှတစ်ခုစီသည်အားကစားကိုစဉ်းစားသော ၀ တ်စုံကိုကိုယ်စားပြုသောဖမ်းဆီးရမိသည့်ခဲတံတစ်ခုဖြစ်သည်။ လက်မှတ်များကို ၀ ယ်ရန်၊ အဖွဲ့ ၀ င် ဦး ထုပ်၊ လူမှုရေး ထို tweets များကို stream feed တစ်ခုထဲသို့ဆွဲတင်လိုက်ပြီးအသင်းတစ်ခုသည် ၀ ယ်ရန်အတွက်“ nudge” ကိုလျှော့စျေးဖြင့် Tweet ကိုတိုက်ရိုက်တုန့်ပြန်နိုင်သည်။
@NFLfan, မင်းနဲ့ငါတို့အတူရှိနေတယ် - ဘောလုံးရာသီဟာသိပ်မကြာခင်မှာပဲစတင်နိုင်မှာမဟုတ်ဘူး။ သင်၏ပထမဆုံး tailgate အတွက်အဆင်သင့်ဖြစ်ရန်ကျွန်ုပ်တို့၏ပန်ကာစတိုးဆိုင်တွင် ၁၅% ခန့်ကျသင့်မည်လား။ ကမ်းလှမ်းမှုအတွက်ဒီနေရာကိုနှိပ်ပါ
SocialCentiv သည်၎င်း၏အားကစားစျေးကွက်ရှာဖွေရေးလုပ်ငန်းတွင် ၈၀ ရာခိုင်နှုန်းတိုးတက်မှုရှိကြောင်းကြေငြာခဲ့သည်။ ကုမ္ပဏီကယုံကြည်သည်မှာရင်းနှီးမြှုပ်နှံမှုပြန်ရခြင်းသည်တိုးတက်မှုအတွက်အကြောင်းဖြစ်သည်။ ၀ န်ဆောင်မှုခံယူသူအချို့အတွက် SocialCentiv တွင်ဒေါ်လာ ၁ အောက်အောက် CPC ရှိပြီးအားကစားစျေးကွက်ရှာဖွေရေးလုပ်ငန်းတွင် CTR ၏ ၄၂ မှ ၅၂ ရာခိုင်နှုန်းအထိရရှိခဲ့သည်။ ROI အရဝယ်သူသည်ကမ်းလှမ်းချက်ကိုပြန်လည်ဝယ်ယူနိုင်ရန်အတွက်ဒေါင်းလုပ်လုပ်ထားသော Tweeted အထူးလျှော့စျေးများ၏ပျမ်းမျှ ၃၄ ရာခိုင်နှုန်းသည်စာရင်းသွင်းသူများဖြစ်သည်။
မှတ်ချက် - ကျွန်တော်တို့ကတွဲဖက်တယ် လူမှုရေး.
Tags: NFLလူမှုရေး centivလူမှုရေးနားထောင်ခြင်းလူမှုရေးကမ်းလှမ်းမှုလူမှုရေးtwitter မက်လုံးtwitter နားထောင်ခြင်းtwitter ကမ်းလှမ်းချက်များ
အဘယ်ကြောင့်တုံ့ပြန်မှုရှိသောဝဘ်ဒီဇိုင်း? အကြောင်းရင်း (၈) ချက်
မတ်လ 25, 2015 မှာ 5: 15 AM
ကျွန်ုပ်တို့သည်ဤလူမှုကွန်ယက်မှနောက်ဆုံးသတင်းအသစ်ကိုအမြဲတမ်းလိုက်နာသည်။ အထူးသဖြင့်အခွင့်အလမ်းနှင့်ဤလူမှုမီဒီယာကို အသုံးပြု၍ စျေးကွက်ရှာဖွေရေးရည်မှန်းချက်အတွက်ဖြစ်သည်။